Radio Australia’s Interview on Transparency in Families – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Radio Australia’s Interview on Transparency in Families
မိဘနဲ့ သားသမီးကြားက ပွင့်လင်းမှု အတိုင်းအဆ
Radio Australia က Me lbourne ကနေ ကျွန်တော့်ကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ လှမ်းပြီး တွေ့ဆုံ မေးမြန်းပါတယ်။ အဲဒီ့ရေဒီယိုရဲ့ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် တာဝန်ခံက ၁၉၉၉ ခုနှစ်တုန်းက ဆစ်ဒနီက SBS အသံလွှင့်ဌာနရဲ့ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာ အလုပ်လုပ်နေပြီး အဲတုန်းက အော်စီကို ရောက်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့ အားထုတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကို လက်မခံဘဲ ကျွန်တော့် စိတ်ကြိုက် ပြောချင်ရာ ပြောတဲ့ ၁၅ မိနစ်စာလေးတစ်ခု အသံသွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ ခေတ်တုန်းက အခုလို အိတ်ဆောင် အသံဖမ်းစက်တွေလည်း သိပ်မတွင်ကျယ်သေး၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ အသံတွေ ပေးပို့တာလည်း ခေတ်မစားသေးတာမို့ အဲတုန်းက အသံလွှင့်ချက်ကလေးကို မိတ္တူ ယူမထားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အခုတစ်ခါလည်း Raido Australia က တယ်လီဖုန်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာတော့ မိဘနဲ့ သားသမီးဆက်ဆံရေးကိစ္စဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ လက်ခံ ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ မေးမြန်းသူက “ကိုဇာနည်လွင်ဦး”ဆိုတဲ့ တောင်ကြီးသားလေးပါ။
သည်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက် အင်္ဂါနေ့မှာ ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ၅ နာရီခွဲက ၆ နာရီ တစ်ကြိမ်၊ ညဦး ၇ နာရီခွဲက ၈ နာရီ တစ်ကြိမ်၊ တစ်နေ့ကို နာရီဝက်စာ နှစ်ကြိမ် ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ သူတို့ရဲ့ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်ကနေ ထုတ်လွှင့်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (အဲဒီ့ ရေဒီယိုနဲ့ အစီအစဉ် အသေးစိတ် သိလိုပါရင် အခု စာမျက်နှာမှာ တင်ထားတဲ့ သူတို့ရေဒီယို အမှတ်တံဆပ်ကို ဖြစ်စေ၊ အရောင်ပြောင်းထားတဲ့ Radio Australia စာတန်းများကို ဖြစ်စေ ကြွက်နှုတ်သီးလေးနဲ့ ထိုးပြီး ကြွက်ရဲ့ ဘယ်ဘက် နှုတ်ခမ်းကို ဖိလိုက်ရင် သူတို့ စာမျက်နှာများဆီ ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။)
ကျွန်တော့်ဆီကို မေး(လ်)က တစ်ဆင့် လှမ်းပို့ပေးလိုက်တဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် အသံဖိုင်လေးကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
Author lettwebawPosted on 22 September 2011 27 September 2011 Categories FM Broadcasts, Parenting, Reproduction, Sound File, Thoughts
5 thoughts on “Radio Australia’s Interview on Transparency in Families”
22 September 2011 at 4:27 pm
How can I download this mp3 file? I want to download and save in my computer.
22 September 2011 at 4:49 pm
You can’t download unless you have an IDM (internet download manager) software. Sorry for the inconvenience.
26 September 2011 at 10:26 pm
I already downloaded with IDM. Thanks Sayar!
23 September 2011 at 12:22 am
i’ve downloaded it not only with the IDM but also with my heart
not only to listen but also to practice.
9 October 2011 at 11:46 am
ပွင့်လင်းမှုနှင့်လေးစားမှုကို သေသေချာချာစဉ်းစားမိခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါဆရာ။
Previous Previous post: Padamya FM: Father’s Day
Next Next post: Emotional Literacy and Development